Nsogbu na 403 Amachibidoro Iwu - Geofumadas
Nsogbu na nje 403
Mee, 2011 Internet na Blogs
Ihe karịrị otu ugboro ihe yiri nke a mere anyị, na ịbanye na nke anyị, ozi ndị na - esonụ na - egosi:
I nweghị ikikere iji nweta /index.php na sava a.
Tụkwasị na nke ahụ, a zutere ihe ọjọọ 403 Forbidden mgbe ọ na-anwa iji ErrorDocument iji mee ka arịrịọ ahụ dị.
Apache mod_fcgid / mod_auth_passthrough 2.3.5 / 2.1 mod_bwlimited / FrontPage 1.4 / 5.0.2.2635 80 Server na Port geofumadas.com
E nwere variants nke otu njehie, ihe dị iche iche ihe mere, ma ọ bụrụ na ị nwere a kwadoro na saịtị na WordPress na-arụ ọrụ n'ime admin panel, ka nke a mere, anyị kwesịrị mere a iju edinam na-amanye ndị Apache mgbochi dị ka mgbochi akpaka (na-ebugharị ebugharị). N'ihe m, ọ meela m ọtụtụ ugboro, dị ka:
Inwe otutu ebe obibi ebe obibi, otutu mgbe otutu akwukwo ma o bu ihe a ma ama nke na acho ichota otutu ihe.
Na-agba ọsọ ederede dị oke oke, dịka ndozi-ndozi na ọtụtụ ndekọ ahọpụtara. Ugbu a WordPress na-enye gị ohere ịhọrọ ọnụọgụ ndekọ ndị egosiri ọ na-akwado ọtụtụ ihe mana ọ dị egwu ma ọ bụrụ na anyị agbanwee oke mgbanwe na ngosipụta ahụ.
Anyị ga-enyocha ma ọ bụrụ na ọ bụ naanị nsogbu igbochi maka ndị otu anyị, n'ihi na oge ụfọdụ ihe nchọgharị ahụ nwere mgbagwoju anya na kuki. Ikpochapụ ebe nchekwa kuki bụ ụzọ ịpụ, mana akara kacha mma Woopra, n'ihi na ebe ahụ anyị nwere ike ịhụ ma ndị ọrụ ndị ọzọ na-esite na mba ndị ọzọ na ọ bụ naanị nsogbu anyị. Mgbe ahụ ị ga - amata faịlụ nke a na - egbochi. Na nke egosiri na ọ bụ index.php.
Mgbe ahụ ị ga-aga cpanel ma nwalee nnweta anyị na-enye anyị ohere ịnyegharị ya. Enwere m ike ịhụ na e mepụtara ndepụta a, jiri mkpọchi ozi na akara aha ya dị ka index.php.wpau.bak.
Dabere na faịlụ ọ bụ na ihe kpatara eji gbochi ya, a ga-eme ya na Cpanel:
Kpọgharia ya ma dochie ya na nke gara aga.
Gbanwee ikikere ka 644
Ibudata ya bulie mwepụ
Gbanwee ya site na ftp na Dreamweaver.
Anyị nwere ike weghachite ozi ahụ, dabere na ihe ahụ "megharia ọrụ emela n'ihi na anaghị ekwe ya na ..."
Nke ahụ ga-enye anyị echiche ma ọ bụrụ na ekpochi folda public_html niile. Nke ahụ pụtara, na-egbochi onye ọrụ anyị maka nke a.
O nweghi ihe ozo kariri ikpo onye nhazi ngalaba ahu, ma juo ya ka o mee ya; Ma, ị ga-agwa ha eziokwu banyere ihe anyị mere na ihe anyị chere kpatara nsogbu ahụ. Ihe ngosi di nma bu na enyere wp-admin ka enyere ya aka, dika o putara na ha na echere gi ka idozi nsogbu di n’ime ma obu ip nke komputa gi enyere aka ibanye n’ime ndi ochichi.
Onye nchịkwa nlekọta nchịkwa ga-anataworị tiketi site na ndị nchịkwa ọbịa, na-akpọsa nsogbu ahụ n'ụdị:
M na-arịọ mgbaghara mana anyị amanyela anyị ka ịkwụsịtụ edemede "/home/geofumadas/public_html/index.php" na "/home/geofumadas/public_html/xmlrpc.php" dị ka ha na - akpata nnukwu nsogbu na sava ahụ na, n'ihi ọdịdị nke nsogbu ahụ, a manyere anyị ime ihe ozugbo maka ahụike sava…
Mgbe ahụ, ha na-atụ aro omume ikpeazụ ndị nwere ike ịkpata nsogbu na ụzọ ndị dị mfe iji mee ka ọrụ ahụ dịkwuo mma.
Ọ bụrụ na anyị ji n'aka na nsogbu ahụ, ma anyị ekwenyeghị na anyị nwere ụdị oghere ọzọ, ọ kwesịrị ịrịọ ka ahapụ ya. Ha ga-eme nnwale wee weghachite nnweta gị.
Maka nke na - esote, anyị ga-akpachapụ anya iji iji edemede dị arọ.
Previous Post«Previous Ahịrị 52
Next Post Usoro ọmụmụ nkuzi ọhụrụ. Òtù DMSNext »